Qarreewwan akkasitti Hacee yaadatan Galatoomaa!! Historical picture Abiyyi suuraa Minilik kaasee iddoo sanii kan ofii godhachuun waan sirriiti. Baga godhate. Reeffi maal godha ree? Amma kan Masaraa keessatti tolche saniis kan isaatiin bakka haa buusu. [Read More]
#Maqaa ABOtiin Gantootaaf Suuqa Bananii Daladala Siyaasaa Gaggeessuun Nuuf Haaraa Ta’uu Baatus, Dhugaa Jiru Ummata Keenya Hubachiifnee Burjaajii Irraa Oolchuuf ABOn Tokko Malee, Lamaa fi Sanaa Ol Hin Jiru. Waaqoo Noolee tiin 02, 03, [Read More]
Hanguma Oromoon jabaatee falmatu, diinni waan didaa ture fudhachuuf dirqama!! On 22 June 2020, security forces burned down Mr. Yonas Hirpasa’s house in West Wollega zone, Gulisso district, Sanki Danno kebele, because his son joined [Read More]
Oduu Ammee: Manni murtii walii galaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbaataa, oolmaa har’aa waaree booda ooleen, Hidhamtootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran Hospitaala dhuunfaafi hakiima dhuunfaa ofii fedhanitti geeffamuudhaan akka yaalaman ajaje. Hidhamtootni kun lagannaa nyaataa [Read More]
Oduu Ammee! Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo galmee Obbo Jawaar Mahaammad jalatti himataman har’a Mana Murtitti dhihaachuu maddeen OMNtti himan. Jawaar Mahaammad faa har’a mana murtitti kan dhihaatan erga lagannaa nyaataa eegalanii guyyaa 33 booda wayta ta’u [Read More]
Oduu Keeniyaatii dhufe Pirezedaantiin Keeniyaa, Uhuru Keeniyaataa Keeniyaatti Ambaasaaddera Itoophiyaa,Obbo Mallas Alam waan Itoophiyaa keessaa hatattamaan ibsa gahaa fi dhugaa akka kennuuf waajjira isaatti waamee jira. Ibsi kun bor kan eegamu yoo tahu, kan sobaa [Read More]
Maalitti jiru? ABOn karaa nagaa biyya erga seenee booda shirootni garaa garaa irratti raawwatamaa turan. Kana keessaa tokko miseensotni WBO dhiigaa fi lafee isaanii qabsoo Oromoof sooraa turan akka diigamanii fi caasaa basaasa PP jalatti [Read More]
No Justice In Ethiopia: Gaaffii ta’uu baatus yaadumatti akka qabannuufi 1- Lamiroot Kamaaliin namni mana hidhaatti argee beeku jiraa ?? 2- Mana hidhaa isa kam keessaatti hidhamtee jirtii ?? 3- Lamiroot mana hidhaa jirti moo [Read More]
➛#Qaallittii_Update! Free all Oromo Political prisoners! -Waan isaan fakkaatan, haala isaan keessa jiran ijaan argee barreeffamaanillee ibsuuf jechan dhabe. Hundi isaanii akka baala mukarraa citee lafa bu’eetitti gogaan isaanii irratti coolagee jira. –#HAMZAA:- halkan edaa [Read More]
Waatu waatu jira. Seenaa biyya Itoophiyaa ja’amtu tanaa keessatti Nama ajjeechaan shakkamee yeroo gabaabduu keessatti qulqulluudha ja’ame manni Murtii murteesse #Lamrot_Kamal nama duraati natti fakkaatti. Mee ilaalaa sanuu nama ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame nama guyyaa [Read More]